Vovoka mika tany mando HUAJING novokarina avy amin'ny tsiranoka mika voajanahary tsara. Mandritra ny dingan'ny fanamboarana ny fanadiovana, fanasana, alemana, fanosehana amin'ny tsindry ambony, fanamainana amin'ny maripana ambany, fisavana madio kokoa, dia ho lasa mineraly mameno tena tsara izany. Ny teknikan'ny famokarana tsy manam-paharoa dia mitazona ny firafitry ny ravin'i mica, ny tahan'ny lafiny lehibe, ny mari-pahaizana avo lenta, ny fahadiovana ary ny famirapiratany, ny atin'ny vy sy fasika ary ireo fananana indostrialy hafa.
Vovon-dronono mika vita amin'ny savony Huajing no nampiasaina ny flika mika avy any Lingshou Lubaishan Mineral, faritanin'i Hebei, novokarin'ny fisarahana tamin'ny rivotra nentim-paharazana sy ny fizotran'ny fikosehana lena. .
Huajing coating grade mica synthetic dia nampiasaina ny flake synthesika vita tanana, tsy mitongilana ary mamirapiratra. Azo ampiharina amin'ny firakotra avo lenta izy io, ankoatry ny fiasa ny vovo-mika voajanahary, ny fitomboan'ny hafanana dia mety hitombo hatramin'ny 1200 ℃, ny fahadiovana dia mety ho 99,9% , ny fanoherana ny habetsahana dia avo kokoa noho ny mika voajanahary.
Ny vovon-tsakafo Huajing dia namono ny flika mika avy any Lingshou Lubaishan Mineral, Provinsi Hebei. Ny mika Muscovite voajanahary dia miasa amin'ny karazana fonosana isan-karazany hatramin'ny tombony ara-toekarena.
Ny vovoka mika maina dia mety amin'ny fanamarihana ny arabe, fananganana loko ivelany rindrina, lalotra plastika, firakotra manohitra harafesina, sns. Afaka milalao tsara ny tombotsoan'ny rafitra mika roa-habe mika, manatsara ny toetra mekanika an'ilay sarimihetsika mifono, ary manohitra .Ny asany miaro uv tena tsara dia afaka manatsara ny fahaizan'ny toetr'andro amin'ny palitao.
Ny microa dia mihodina indrindra ao anaty rafitra kristaly monoclinal, izay pseudohexagonal flake manify, scaly, platy ary indraindray pseudohexagonal tsanganana. Fahasarotana 2 ~ 3, hery misintona manokana 2.70 ~ 3.20, hakitroky malalaka 0.3-0.5. ny votoatin'ny vy, izay azo atsangana amin'ny ambany ara-dalàna ka hatramin'ny antonony mahazatra, ary azo apetraka ny tsorakazo.
Vovoka mika ambaratonga Huajing, izay ampiasaina indrindra amin'ny plastika injeniera mba hampitombo ny modulus miondrika sy ny fahalalahana; Ao amin'ny sehatry ny kojakoja plastika vita amin'ny vokatra elektronika, aorian'ny fampidirana mika dia mety ho voadio miaraka amina endrika izy ireo. afaka manatsara ny fanoherana ny toetr'andro amin'ny vokatra plastika izy io, ka ny plastika injeniera dia mahazaka hafanana sy fahasamihafana eo amin'ny tontolo iainana;
Vovoka mika ambaratonga Huajing, izay ampiasaina indrindra amin'ny plastika injeniera mba hampitombo ny modulus miondrika sy ny fahalalahana; hampihenana ny fihenan-dàlana. Amin'ny sehatry ny plastika misy ny vokatra elektronika, aorian'ny fampidirana mika dia afaka voadio kokoa miaraka amina endrika izy ireo.
Ny vovo-dronono maina maina an'ny Huajing dia mifaninana amin'ny vidiny ary milamina amin'ny kalitao. Ny vovoka mika madiodio be dia be novokarina tamin'ny fikosehana nefa tsy nanova fananana voajanahary. Mandritra ny famokarana manontolo, dia mandray rafitra feno hamenoana izahay mba hahazoana antoka fa ny kalitaon'ny vokatra;
Ny vovoka mika vita amin'ny hainojingjingjingjingjingjing dia andiana vokatra mika fototra napetraky ny flakes mika avy any Lingshou, faritanin'i Hebei. Ny haben'ny sombin'ireo vokatra dia manarona ny 5mm ka hatramin'ny 10um. Ny dingan'ny fanadiovana dia novolavola tsy tapaka nandritra ny 40 taona. Amin'izao fotoana izao, izy io dia nampiasaina indrindra ho birao fanaingoana anatiny, tabilao mihantona ivelany, fantsom-pako mpitrandraka, tontolo iainana fitaovana fananganana, varavarankely vy sy varavarana, marbra artifisialy sns. Amin'ny coating apetraka dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fanorenana izy io, toy ny loko ivelany rindrina, loko manamarika arabe, plaster, loko mavesatra manohitra harafesina.